प्रत्येक अवसरको लागि उत्तम बाह्य ब्याट्री खोज्दै | आईफोन समाचार
प्रत्येक अवसरको लागि उत्तम बाह्य ब्याट्री खोज्दै
हामी हाम्रो पोडकास्टमा टिप्पणी गर्न वा अर्को स्मार्टफोनको समाचारका बारेमा लेख्ने थकित थियौं, हामी मध्ये धेरैले त्यो २० मेगापिक्सको क्यामेरा वा ब्याट्रीको लागि बदल्छौं जुन हाम्रो स्मार्टफोन वा एप्पल वाचमा धेरै दिन दिन सक्दछ। , हामी जहाँ भए पनि प्लग फेला पार्न चिन्ता नगरिकन। यो भइरहेको बेला, मेरो प्रयोगको लागि सही बाह्य ब्याट्रीको खोजीमा मैले धेरै उम्मेदवारहरू भेट्टाएको छु जुन म तपाईंलाई साझेदारी गर्न चाहन्छु।। तपाईको आईफोनका लागि सब भन्दा राम्रो बाह्य ब्याट्री के हो? आस्तीन वा 'बन्डल' शैलीका लागि जानु उत्तम हो?
1 मोफी: नेताको ग्यारेन्टी
2 आधिकारिक एक: एक ब्याट्री केस
3 Kanex GoPower वाच: बहुमुखी प्रतिभा
4 कुन छनौट गर्ने? तपाईंको आवश्यकतामा निर्भर गर्दछ
मोफी: नेताको ग्यारेन्टी
जब तपाईं बाह्य ब्याट्रीहरूको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ, दिमागमा आउने नाम मोफि हो। यो एक ब्रान्ड हो जुन यस व्यवसायमा वर्षौं देखि आएको छ, म कम्तिमा आईफोनको साथ मेरो पहिलो चरणबाट यो सम्झना गर्दछु, र सबै प्रकारको आकार, र and र क्षमताहरूको ब्याट्रीहरूको विस्तृत सूची छयद्यपि सम्भवत सबै भन्दा राम्रो चिनिने यसको ब्याट्री केसहरू हुन्।
पावरस्टेशन मिनी: यसको सानो आकार र स्लिमनेसको बावजुद यसको 3000००० एमएएच क्षमता छ जुन आईफोन Plus प्लसबाट पनि पूर्ण रूपमा चार्ज गर्न पर्याप्त छ। योसँग USB पोर्ट छ जुन तपाईं कुनै पनि चार्जर केबल जडान गर्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै स्मार्टफोन वा ट्याब्लेट तपाईं रिचार्ज गर्न चाहनुहुन्छ। यससँग धेरै एलईडीहरू छन् जुन तपाईंलाई बाँकी चार्जको बारेमा सूचित गर्दछ। सब भन्दा चाखलाग्दो कुरा यसको मूल्य हो, किनकि over २० भन्दा बढीको लागि तपाईंसँग यो उपलब्ध छ en अमेजन स्पेन.
पावरस्टेशन एक्सएल: पहिलेको भन्दा धेरै समान तर १०,००० एमएएच क्षमताको साथ, जुन तपाईले आफ्नो आईफोन Plus प्लस धेरै पटक पूर्ण रूपमा चार्ज गर्न अनुमति दिनुहुन्छ। यससँग दुईवटा यूएसबी जडानहरू पनि छन्, त्यसैले तपाईं एकै समयमा दुई उपकरणहरू पनि चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै तपाईंको आईफोन र तपाईंको एप्पल वाच।। यसमा एलईडी पनि छ जसले बाँकी चार्ज स indicate्केत गर्दछ, र आईफोनको जस्तै रंगमा उपलब्ध छ ता कि तिनीहरू आपसमा संघर्ष गर्दैनन्। यो प्राय: around €€ को आसपासमा हुन्छ अमेजन स्पेन.
आधिकारिक एक: एक ब्याट्री केस
यदि तपाईले के सोचिरहनु भएको बाह्य ब्याट्री हो जुन सँधै तपाईसँग जान्छ र तपाईले कुनै पनि केबुलहरू बोक्नुपर्दैन, कुनै विकल्प बिना यसले विकल्पले प्रस्ताव गर्दछ। एप्पल यो एक त्यस्तो चीज हो जुन मलाई सबैभन्दा उपयुक्त देखिन्छ, किनकि यसले सिलिकॉन केस जोड्दछ जुन तपाईंको उपकरणलाई पूर्ण रूपमा एक ब्याट्रीसँग जोगाउँदछ जसले तपाईंलाई LTE प्रयोग गरेर २ navigation घण्टासम्म नेभिगेसन दिन सक्दछ। चार्जिंगको लागि उही आईफोन लाइटनिंग कनेक्टर प्रयोग गरेर, तपाईले कुनै पनि अन्य बोक्नु आवश्यक पर्दैन, जो एक प्लस पनि हो। यो मोफीले प्रस्ताव गरेको विकल्पहरू भन्दा महँगो छ, यो सत्य हो, तर व्यक्तिगत रूपमा मलाई यसको सौंदर्यशास्त्र राम्रो मनपर्दछ, यद्यपि सबैजना सहमत छैनन्। अवश्य पनि, यो आईफोन7को लागि मात्र उपलब्ध छ, त्यसैले यदि तपाईंसँग आईफोन Plus प्लस विकल्प छ Mophie यसको रस प्याक एयरको साथ तपाईले खोज्नु भएको कुरा हो।
Kanex GoPower वाच: बहुमुखी प्रतिभा
वैकल्पिक कि Kanex हामीलाई एक कॉम्प्याक्ट आकार संयोजन को बहुमुखी प्रतिभा संग एकै समय मा तपाइँको एप्पल वाच र आफ्नो आईफोन चार्ज गर्न को सक्षम को साथ। बाहिरी ब्याट्रीको शीर्षमा तपाइँको वाच राख्नु पहिले नै समावेश गरिएको एप्पल वाच चार्जर एक उत्कृष्ट विचार हो जुन यसलाई ट्राभल चार्जरको रूपमा प्रयोग गर्नु हामीसँग बीसवटा केबुलहरू लिनको लागि बिना हो, र हामी एक मात्र समयमा हामी USB पोर्ट चार्ज गर्न प्रयोग गर्न सक्दछौं। आईफोन, यसको क्षमता ,4.000,००० एमएएच छ, जुन Watch पटक एप्पल वाच र आईफोन १.6पटक चार्ज गर्न पर्याप्त छ। यदि हामी गणित गर्छौं हामी एकै समयमा कुनै समस्या बिना आईफोन र एप्पल वाच चार्ज गर्न सक्छौं। यससँग गोलाकार निलो एलईडी संकेतक छ जुन बाँकी चार्जलाई स indicates्केत गर्दछ। तपाईंसँग यो उपलब्ध छ अमेजन € १119 को लागि।
कुन छनौट गर्ने? तपाईंको आवश्यकतामा निर्भर गर्दछ
मेरो केसमा, म के खोज्दैछु बाहिरी ब्याट्री हो जुन म लिन सक्दछु जब म घरबाट टाढा सुत्न जान्छु। यदि हामीले ध्यानमा राख्यौं भने मेरो आईफोनको साथसाथै मसँग एप्पल वाच पनि छ, मलाई लाग्छ कि यो स्पष्ट छ कि सबै भन्दा राम्रो विकल्प Kanex GoPower वाच ब्याट्री जस्तो देखिन्छ।। तर यदि तपाईले चाहानु भएको ब्याट्री हो जुन तपाई आफ्नो प्यान्ट वा झोलामा बोक्न सक्नुहुन्न अत्यधिक बल्ज नगरीकन, र सस्तो पनि छ भने, मोफी पावरस्टेशन मिनी सबैभन्दा उपयुक्त देखिन्छ, वा ब्याट्री केस, या त एप्पलको वा मोफीबाट, यद्यपि मूल्य पहिले नै पर्याप्त बढ्दो छ। यदि तपाईंलाई केहि दिनको लागि धेरै क्षमताको साथ तपाईंलाई केहि दिनको लागि होल्ड गर्न वा आईप्याड चार्ज गर्न आवश्यक छ, भने पावरस्टेशन एक्सएल तपाईंको आदर्श विकल्प हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » प्रत्येक अवसरको लागि उत्तम बाह्य ब्याट्री खोज्दै
मसँग दुई शंकास्पद क्वालिटी (चिनियाँ) पावरब्यान्क्स छ जुन 50० भन्दा बढी चक्रसम्म चलेको छैन। मैले २०,००० एमएएच शाओमी पावर बैंकमा केहि बढी खर्च गरेँ र यो एउटा विस्फोट हो। त्यो हो, आफ्नो तौल।
एजे Fdz भन्यो
तपाईं ती चार्जहरूको लागि सनस्क्रीन ल्याउनेहरूको के सोच्नुहुन्छ?
AJ Fdz लाई जवाफ दिनुहोस्
मैले अवसरमा तिनीहरूलाई प्रयास गरेको छु, तिनीहरू सुस्त छन् तर तिनीहरूले तपाईंलाई हतार बाट बाहिर निकाल्न सक्छन्। केहि अवसरहरूमा म तिनीहरूलाई उपयोगी देख्छु।
एप्पल स्टोर, ठुलो ध्यान नदिई रहेको ठूलो स्याउको अनुप्रयोग
Gmail आउने दिनमा गुगलको आफ्नै विस्तारहरूसँग उपयुक्त हुनेछ